Itoobiya Oo Ku Andacoonaysa Inay Dib Ugala Wareegtay Magaalooyin Jabhada Tigray – Rasaasa News
Itoobiya Oo Ku Andacoonaysa Inay Dib Ugala Wareegtay Magaalooyin Jabhada Tigray
Jijiga – Dec 18, 2021 – Ciidamada Itoobiya ayaa dhawr magaalo oo kala duwan ka qabsaday dagaalyahanada Tigreega oo ay ku jiraan Kobo iyo Woldiya oo ku yaalla waqooyiga, sida ay dawladdu sheegtay Sabtidii.
Khilaafka u dhexeeya ciidamada daacada u ah Ra’iisal wasaare Abiy Axmed iyo (TPLF) ayaa dhaliyay dhibaato bini’aadantinimo oo aad u daran, waxayna keentay in hay’adda xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ay amarto in baaritaan caalami ah lagu sameeyo xadgudubyada lagu eedeeyay.
Abiy, oo hore u ahaa Gaashaanle Sare oo ka tirsanaa ciidamada milateriga, ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu u jihaysan doono dagaalka, iyada oo markaas ay dawladdu sheegtay inay dib ula wareegtay dhawr magaalo oo muhiim ah.
Isgaarsiinta ayaa go’an goobaha ay colaaduhu ka jiraan, waxaana la xaddiday galitaanka saxafiyiinta, taas oo adkaynaysa in la xaqiijiyo sheegashada goobaha dagaalka.
Laakiin Sabtidii, adeegga isgaarsiinta dawladda ayaa sheegtay in ciidamada taabacsan Abiy “ay ku guuleysteen inay si buuxda u maamulaan Sanqa, Sirinqa, iyo sidoo kale magaalooyinka Woldiya, Hara, Gobiye, Robit iyo Kobo.”
Laga bilaabo dabayaaqadii Oktoobar, labada dhinac mid kastaa wuxuu sheeganayay horumar dhuleed oo waawayn iyada oo dhawr magaalo oo muhiim ah ay muuqato inay gacmaha is beddeleen toddobaadyadan tan iyo markaas.
Axadii hore ayay TPLF dib ula wareegeen xarunta UNESCO ee Lalibela, 11 maalmood kadib markii ciidamada Itoobiya ay sheegeen in ay dib ugala wareegeen kooxda TPLF.
Dagaalkan ayaa waxa uu barakiciyey in ka badan laba milyan oo qof, boqolaal kun oo qofna waxa ay galeen xaalad macaluul u eeg, sida lagu sheegay qiyaasaha Qaramada Midoobay, iyada oo la sheegayo in labada dhinacba ay geysteen xasuuq iyo kufsi wadareed.
Jimcihii, Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa u codeeyay in baadhayaal caalami ah loo diro waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika, iyada oo laga digayo rabshado guud oo soo socda, tallaabadaas oo ay ku gacan saydhay Addis Ababa.
Dadaallo diblumaasiyadeed oo uu hormuudka ka ahaa Midowga Afrika oo lagu doonayay in xabad joojin lagu gaadho ayaa lagu guuldareystay in horumar muuqda laga gaadho.
Does Amoud University Help the State with a Backward Education?